XX सताब्दी को 30-एँ गर्न राक्कुन कुकुर अप, रूस को युरोपेली भाग मा अज्ञात थियो। यसको वासस्थानमा को प्राकृतिक क्षेत्र - जापान, चीन, को पहाड र जंगल क्षेत्रहरु छ कोरियाई प्रायद्वीप। रूस को एशियाली भाग मा, यी पशुहरू लामो Ussuri क्षेत्र र Amur क्षेत्रमा बस्ने गरेका छन्। त्यहाँ तिनीहरूले किनभने जनावरको-poloskuna संग बाह्य समानता को "Ussurian raccoons" भनिन्थ्यो। सोभियत शक्ति को 30 वर्ष मा फर निर्माताहरु को शिकार आधार पूरक गर्न 76 क्षेत्रहरु र पूर्व सोभियत संघ को गणराज्यहरु मा फर-बोकेका जनावरहरूको दस हजार प्रजाति ल्याउन निर्णय भएको थियो। Ussuri बासिन्दाहरू नयाँ climatic अवस्था भिज्न ज्ञात उत्कृष्ट क्षमता गरे, र अब तिनीहरूले एक पटक ठूलो देश "उपनगरहरुमा, गर्न" वितरण गरिन्छ।
तर सोभियत संघ को व्यापार अधिकारी उद्योग फर-असर जनावर संग प्याकेजमा भनेर थाहा थिएन, र तिनीहरूले खतरनाक, धूर्त predator हुनेछ। राक्कुन कुकुर, भइरहेको, adaptability, पनि monstrous र प्रजनन साथै चाँडै चिकन coops मा सबै भन्दा साधारण नाली हुन्छन्। त्यो संकोच गर्दैन फीड को पीछा मा: कुनै पनि जवान, ruining चरा गुँड खाने, हत्या सानो स्तनधारी भ्यागुतो, कीरा, छेपारो, माछा, कम छैन खान्छन् र carrion (कहिले काँही पनि खोक्रो चिहानहरू खण्डन)।
Kirovograd क्षेत्रमा अज्ञात प्राणीलाई ravages चरा खेत - भर्खर युक्रेनको furor "छुपकाबरा" बनाएको छ। यो चलाखीपूर्ण हुन्थे र निरंतर एकै समयमा - व्यापक डेलाईट चरा दाँया मालिकहरूको noses अन्तर्गत टाढा लगे, एक मा जम्पिङ-खुट्टा बार swoop परे। त्यसैले, अन्त मा चिकन coops मा नाली एक र्याकुन कुकुर हुन बाहिर गरियो।
को समानता भए तापनि त्यहाँ जनावरहरूको दुई प्रकारका बीच सम्बन्ध। गाढा खैरो, पछाडि विशेषता अनुदैर्ध्य धर्काहरू संग - उनि लगभग एउटै रंग कोट छ। तर र्याकुन फर नरम र थप कोमल, बाहेक, यसलाई स्पष्ट पुच्छर देखिने तेर्सो धर्काहरू, छ कुकुर पुच्छर मोनोक्रोम को प्रतिनिधि गर्दा।
एक स्याल भन्दा अलि कम आकार हुँदा र्याकुन कुकुर stocky, बलियोसँग शट छोटो खुट्टा र एउटा सानो टाउको संग शरीर तल छ। थूथन - बताएको छ, कान - सानो। poloskuna अनुहार निहित र र्याकुन कुकुर मा "मास्क" को लागि विशिष्ट, तर यो व्यापक कालो sideburns द्वारा फ्रेम छ। यी पशुहरू पनि कुकुर हौं भएकोले विधि शिकार तिनीहरूले - हामी थाहा रूप मा, खुट्टा खुवाइन्छ जो, एक ब्वाँसो जस्तै। को र्याकुन कहिल्यै एक किलोमिटर भन्दा टाढा यसको वासस्थानमा बाट प्रस्थान गर्दा पशु उत्पादन को खोज मा, 7-10 मी लाग्न सक्छ। तर, छोटो खुट्टा taiga अतिथि उहाँलाई गहिरो हिउँ समयमा, हिउँदमा शिकार अनुमति थिएन। तसर्थ, यी पशुहरू तथ्यलाई सबै कुकुर Hibernate एक्लै द्वारा अद्वितीय छन्। तर, आफ्नो सपना एक बिट: तिनीहरूले उठ र शिकार मा जाने हिउं पग्लनु, र frosts फेरि निदाउँछन्।
राक्कुन कुकुर - धेरै मायालु आमाबाबु र विश्वासी spouses। तिनीहरूले लेट हिउँदमा मेट गर्न, शरद ऋतु मा परिवार गठन र पिल्ले मार्च वा अप्रिलमा जन्म छन्। फोहर फाल्न 6-7 पिल्ले को (र प्रशस्त खाना र 14-16 को अवस्थामा) बनेको, दुवै आमाबाबुले खुवाउन। शरद ऋतु को अन्त द्वारा जवान जनावर स्वतन्त्र हुन्छ र उमेर को9महिना मा यौन परिपक्वता पुग्छ। बनबिलाव, ब्वाँसा, Foxes र आवारा कुकुर: जंगलमा जनावर लामो,5वर्ष को एक औसत, हाम्रो वनको धेरै शत्रुहरू छन् किनभने बाँच्न छैन। पशुधन जनावर र रेबीज epizootic र piroplasmosis घास काटन।
र कति जीवन घरमा कुकुर राक्कुन? यो 13 वर्ष सम्म बाँच्न सक्छ भन्ने बाहिर जान्छ। जापान, यी पशुहरू लामो domesticated गरिएका छन्, र उनि दृढ एक पंथ tanuki विकसित गरेको छ कि जनसंख्या को जीवन मा स्थापित छन् (जापान मा यस जनावर भनिन्छ)। को बढ्दो सूर्य देशमा धेरै लोयल्टी र chadolyubie र्याकुन कुकुर मूल्यांकन गर्छौं। उनको बगैंचामा र पनि घरमा रूपमा पारंपरिक मध्यम कुकुर जातिहरु पकड। तिनीहरूले राम्रो कान छ किनभने तिनीहरूले, उत्कृष्ट गार्ड छन्। युरोप मा, पछिल्लो शताब्दीमा आफ्नो रत्तीएको 90-एँ संग। तथापि, यी पशुहरू आक्रामक हुन सक्छ, र सामान्यतया, तिनीहरूले साह्रै fussy छन्। तपाईं आफ्नो कम्बल अन्तर्गत सुत्थ्यौं tanuki गर्न चाहनुहुन्छ भने, उहाँले एक हट निर्माण गर्न आवश्यक छ। र र्याकुन कुकुर गाउन सक्नुहुन्छ। छैन त, "गाइरहेका" साधारण कुकुर, तर साँच्चै रूपमा: सम्पूर्ण उत्पादन roulades र trills, प्रकाश सीटी, एक शब्द, एक जनावर छैन, र एक बुलबुल!
लोखर्के Jungar: कैद प्रजनन
बच्चा सीट लागि Isofix बन्धन
किन खुला सञ्झ्यालको सपना? सपना पुस्तक भन्नेछु!
महिला रोगजनक: आफ्नो प्रेम रक्षा
रचनात्मक कार्यशाला: एक सूर्यमुखी आकर्षित गर्न कसरी
फ्रान्स: सूची, तिनीहरूलाई, Jewels को संसारको खजाना को सूची जस्तै सूची
सिमी "कालो आँखा": सबैभन्दा पुरानो विकास बिरुवाहरु को एक को प्रयोग
के म नकारात्मक आरएच कारक भएका मान्छे थाहा हुनुपर्छ